Renaissance, Beyoncé's new album, yatova nezuva rekuburitswa | Bezzia
Maria vazquez | 19/06/2022 22:00 | Nhau
Beyoncé akazivisa muchidimbu svondo rino nezve Renaissance kutanga. Iri basa idzva rinouya makore matanhatu mushure mechiri kusvika parizvino dambarefu rake rekupedzisira ega Lemonade raakadomwa kuve dambarefu repamusoro regore kuGrammys uye akahwina mubairo webest contemporary urban music album.
Mafambiro ari mu pasocial network yevanyori vanowanzofanotaura chiziviso chakakosha. ZvaBeyoncé hazvina kudaro. Zvese zvaive zano rekupa Renaissance Act 1, chikamu chekutanga chealbum iro richaburitswa mune akati wandei zviito. Inowanikwa muna Chikunguru 29Pane munhu anokahadzika kuti zvichapa zvakawanda zvokutaura nezvazvo here?
Beyonce ndiye muimbi ane akawanda maGrammy Awards venhoroondo, makumi mana nemasere pamwe chete. Nhoroondo yaro refu uye yakabudirira inoreva kuti chero ad inongoerekana yakanganisa pasi rose. Mazwi mashoma akanyorwa, mugadziri haasati amboda chimwe chinhu kuti munhu wese ataure nezvekudzoka uku kwakamirirwa kwenguva refu.
2 mapurojekiti ake achangoburwa
Chii chatinoziva nezveRenaissance nhasi? Kupfuura chokwadi chekuti chiitiko chekutanga chichaburitswa munaChikunguru 29, zvimwe zvishoma zvakazoitika kubva pabasa iri. isu chete tinoziva izvozvo Ichave ine nziyo makumi mashanu yakafuridzirwa uye yakagadzirwa kubvira 2020.
Kuti muimbi anga achishanda pabasa idzva iri kwemakore akati wandei hachisi chinhu chitsva. Mubvunzurudzo dzakaitwa gore rapfuura, muimbi akasimbisa kuti aive akapfeka gore nehafu mu studio. Nezvechinangwa chake nebasa idzva iri, akataura ipapo: "Nekuzviparadzanisa uye kusaruramisira kwegore rapera, ndinofunga kuti tose takagadzirira kutiza, kufamba, kuda uye kuseka zvakare." "Ini ndinonzwa sekunge kune kuvandudzwa kuri kuuya, uye ndinoda kuve chikamu chekukuchidzira kutiza munzira chero yandinogona. ", akawedzera.
Tichafanira kumirira kusvika Chikunguru 29 kuti titeerere chikamu chekutanga cheichi chirongwa chemimhanzi chitsva. Asi, kwete zvakanyanya kuve neruzivo rwakawanda nezve ino, kana saka isu tinovimba!
mapurojekiti ake achangoburwa
Izvo zvekuti makore matanhatu apfuura kubva Beyoncé akaburitsa bhuku rake rekupedzisira hazvireve kuti amiswa. Kubva 2006 muimbi atora chikamu mumapurojekiti akasiyana senge The Carters, chirongwa chemimhanzi chaanogovana nemurume wake Jay-Z. Uye iyo yavakaburitsa iyo albhamu Zvese Zviri Rudo muna 2018.
Kwapera gore, muimbi akanyora uye akapa izwi kune dzinoverengeka nziyo dzeiyo vhezheni itsva Disney classic The Lion King. Pamusoro pemuimbi, dzimwe nyeredzi dzakaita saChildish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrel Williams kana mwanasikana wake Blue Ivy vakabatana pane izvi. Imwe yenziyo dzenziyo, Black Parade, yakahwina 2021 Grammy yekuita zvemhando yepamusoro R&B, ichipa Beyoncé giramufoni rake regoridhe rechimakumi maviri nemasere.
Gore rimwe chetero muimbi akapa izwi kuti Be Mupenyu, rwiyo kubva muruzha rweThe Williams Method. Beyoncé akavhura ma94th Academy Awards nekuita kwedingindira iri pamatare etenisi eTragniew Park muCompton, achiperekedzwa naBlue Ivy Carter, vatambi vechikadzi vaMambo Richard, Saniyya Sidney naDemi Singleton, uye Compton Cowboys Junior Equestrians.
Muimbi uyu akabatanawo nevatambi vakasiyana siyana vakaita se muimbi Megan Thee Stallio mune remix yeSavage muna 2020 kana Nicki Minaj waakagovana naye muna 2021 Flawless,
Kubva paakava nemukurumbira mukupera kwema1990 semuimbi anotungamira wechikwata chevasikana veR&B Destiny's Child, basa raBeyoncé rakura. Muna 2014, akaverengerwa muTime magazini runyorwa rwe 100 vanhu vane simba zvakanyanya munyika uye munaKurume 14, 2021, panguva yemhemberero dzeGrammy Awards, akaita nhoroondo nekuva muimbi akanyanya kupihwa munhoroondo aine mibairo makumi maviri nemasere.
Munguva yake yekupedzisira, muimbi akazvisimbisa zvakare sereferensi mu kurwisana kwevanhu vatema kusarurana. Mupfungwa iyi, muna 2020 akatanga "Mutema NdiMambo", dambarefu rinoona iro rinopa mutero mukurwira kwenharaunda yevatema uye yaigona kuonekwa paDisney +.
Unoda kunzwa kuti chii chitsva kubva kuna Beyoncé?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Renaissance, album itsva yaBeyoncé, yatove nezuva rekuburitswa